Egwu... Nkezi Halloween Fan na-eme atụmatụ imefu ihe karịrị $100 n'afọ a! | Martech Zone
Maka oge mbụ, onye ọ bụla na-emefu ememme Halloween ga-eru $ 100. N'afọ a, nke ọ bụla n'ime usoro mmefu ego kachasị elu - swiiti, ihe ịchọ mma, uwe na kaadị ekele ga-ahụ mmụba dị ịrịba ama, ọ bụghị naanị ọnụ ọgụgụ nke afọ gara aga, kamakwa karịa ọnụ ọgụgụ mmefu 2019.
Shelf, 021 Emefu Halloween, Ọrịre, Stats, na Trends
Ihe ndekọ Halloween dị elu!
N'afọ gara aga, ihe na-erughị ọkara n'ime anyị nwere mmasị n'ememme Halloween mana mmefu afọ a alaghachila azụ, ahịa ahịa Halloween alaghachila! Nke a bụ ilele stats Halloween ole na ole dị mma:
Onye ọ bụla na -akwado Halloween na -eme atụmatụ imefu $ 102.74, oge mbụ ego emefuru karịrị $ 100.
Pasent 82 nke ezinụlọ US nwere ụmụaka na -eme atụmatụ ime ememme Halloween.
Pasent 96 nke ndị na-eme ememme ga-ekesa swiiti maka Trick-or-Treaters.
Ndị sonyere na Halloween na -eji mgbasa ozi mmekọrịta iji kpalie mmụọ ha, na -eji Facebook, Instagram, Pinterest na YouTube chọta echiche na ịchọ mma.
A ga-emefu ọtụtụ narị nde ndị ọzọ kwa otu kamgbe 2019, ewezuga uwe, nke na-alaghachi na ọnụọgụ tupu ọrịa na-efe efe na ijeri $ 3.3 na mkpokọta mmefu.
Ndụmọdụ 3 iji bulie ahịa ahịa Halloween gị
Ndi akwukwo na Adịghị adị gụnyekwara ụfọdụ ndụmọdụ dị egwu iji bulie mbọ ahịa ahịa Halloween gị elu:
Lekwasị anya n'iwu ụlọ mara amara n’oge niile Atụmatụ ahịa ahịa Halloween.
Chepụta ma kesaa nkeonwe Nduzi ezumike maka ndị na-ege gị ntị.
Chọọ ma chọta ụfọdụ Ndị na -emetụta Halloween ịgbasa okwu. Asọmpi enyi na enyi nwere obere ihe nrite ego ma ọ bụ ezigbo nnwere onwe ga -abụ ụzọ dị mma iji bulie ọhụhụ gị mgbe ị na -achọ ire ahịa obere ihe nkiri Halloween.
Tags: 2021halloweenahịa ahịa influencer nke halloweenahịa ahịa Halloweenịzụ ahịa halloweenemefu ego HalloweenICSCCouncillọ Ọrụ Mba Na-ahụ Maka Shozụ ahịaPinterestntuziaka ngwaahịantinye ngwaahịaretargetingelekọta mmadụ mediaadịonye ọrụ mepụtara ọdịnayavineyoutube